Kickboxing: mamiratra hatrany ireo gasy any Sina | NewsMada
Kickboxing: mamiratra hatrany ireo gasy any Sina
Mitohy ny fahombiazana ho an’ireo mpikatroka malagasy izay misolo tena an’ i Madagasikara any Sina. Fandresena 100 isan-jato hatrany no azo ary samy nahazo izay vokatra tsara izay avokoa ireo niatrika ady nanoloana an-dry zareo Thailandais.
Tena mitondra avo ny voninahitr’i Madagasikara tokoa ireo mpikatroka miisa 7 mirahalahy miatrika “combat pro” any ivelany, raha ny vokatra azo hatreto. Nanomboka ny faran’ny herinandro teo hatramin’ny omaly, fandresena hatrany no azon’izy ireo, na dia hita ho mihamafy aza ireo mpifanandrina aminy. Samy nandray anjara tamin’ny fifanandrinana nanoloana ireo mpikatroka avy any Thailande avokoa izy 7 mirahalahy, dia Rakotomanga Tojo (-60 kg), i Miri Johnson (-60 kg), Andrianantenaina Odilon (-63 kg), i Faray Pierre (-65 kg), i Mickael (-68 kg), i Vohary Pierre (-70 kg) ary Rakotonirina Mahery (-73 kg).
Mitombo ary mihamivoatra hatrany ny traikefan’ireto mpikatroka malagasy amin’ny taranja kickboxing ireto, raha ny nambaran’ny mpikarakara izao ady matihanina izay nandraisan’ny gasy anjara tany Sina izao. Efa hita ho manana haavo teknika ambony izy ireo raha izay ady maromaro efa vita izay, hoy hatrany ny fanazavana.
Ho an’ireo mpikatroka sasantsasany, ity fifanandrinana tamin’ny mpiady avy any Thailande ity no ady farany ho azy ireo, raha ny eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena no resahina. Ho an’Andrianantenaina Odilon manokana, niverina teto an-tanindrazana, omaly, ny tenany ary ny taona 2019 indray vao hanohy ny “combat pro” any ivelany. Torak’izany ihany koa Rakotomanga Tojo, ity farany izay nahita fahombiazana tanteraka nandritra ny fandalovany tany Sina.
Nofoanana ny « Extreme Combat »
Raha fahombiazana no hita tany Sina, somary hiato kely indray ireo mpikatroka ny taranja kickboxing eto an-tanindrazana satria ny taona 2019 indray vao hiatrika ady izy ireo. Nofohanana tanteraka mantsy ilay fifaninanana mitondra ny lohateny hoe “Extreme Combat”. Ady nokasaina hatao, ny 8 desambra ho avy izao, etsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina. Marihina fa ity no fifaninanana farany tokony hotanterahina ho amin’ny taom-pilalaovana 2018.